Tronsmart ONYX PRIME၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် | Gadget သတင်း
Rafa Rodriguez Ballesteros | 26/12/2021 14:00 | ယေဘုယျ, reviews
ကြိုးမဲ့နားကြပ်အချို့ကို ရှာဖွေနေပါသလား။ သင်တွေ့ဖူးသည့်အတိုင်း၊ ဈေးကွက်တွင် လက်ရှိရွေးချယ်စရာများစွာရှိသောကြောင့် ဤသည်မှာ လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် သင်လိုအပ်သော True Wireless နားကြပ်များကို ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းတွင် သင့်အား ကူညီရန်အတွက် ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ဝင်တစားထက်ပိုမို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ရွေးချယ်မှုအသစ်ဖြစ်သည့် Tronsmart ONYX PRIME ကို Actualidad Gadget ဖြင့် ရောက်ရှိလာပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ Tronsmart နားကြပ်များကို ရက်အနည်းငယ်ကြာ စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ၎င်းတို့ရွေးချယ်ပါက သင်ရရှိနိုင်သည့်စျေးနှုန်းအကြောင်းအားလုံးကို ပြောပြပါမည်။
1 Tronsmart ONYX PRIME ကိုဖွင့်ခြင်း
2 ၎င်းသည် Tronsmart ONYX PRIME ဖြစ်သည်။
3 Tronsmart ONYX PRIME မှပေးသောအင်္ဂါရပ်များ
Tronsmart ONYX PRIME ကိုဖွင့်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲလုပ်သကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အရာအားလုံးကို ပြသပါသည်။ ONYX PRIME ၏သေတ္တာအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည် Tronsmart မှ အမြဲတမ်းလိုလို၊ အံ့ဩစရာတွေ မတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်ရှိတယ်။ နားကြပ်အဆိုပါ အမှုအားသွင်း, un လက်စွဲ အသုံးပြုသူနှင့် UBS Type C ကြိုး case တွင် ဘက်ထရီအားသွင်းရန်။
ဝယ်ပါ။ Tronsmart ONYX PRIME အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာအမေဇုံပေါ်မှာ
ကျန်တာတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ pads အပိုစုံ၏စုံတွဲတစ်တွဲ ချိတ်ဆက်ထားသည့်တစ်ခုနှင့်အတူ မတူညီသောအရွယ်အစားသုံးမျိုးရှိရန် နားကြပ်၏ချိန်ညှိမှု။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့လည်း ရှိတယ်။ အခြား "ရာဘာကွင်း" နှစ်ခု၊နားအတွင်းရှိ နားကြပ်၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အံဝင်ခွင်ကျရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊
၎င်းသည် Tronsmart ONYX PRIME ဖြစ်သည်။
Tronsmart ONYX PRIME ရှိသည်။ "နား" ပုံစံဒါပေမယ့် ထုတ်လုပ်သူအနည်းငယ်က သူတို့ရဲ့နားကြပ်တွေကို ဖြည့်စွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဒီဇိုင်းမှာ ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အခြားသော မော်ဒယ်များကဲ့သို့ပင် ဤ Tronsmart နားကြပ်များ အငြင်းပွားဖွယ် နားကြပ်များကို ထည့်သွင်းပါ။ နားအတွင်း၌ ကျန်ရှိနေသော အရာများသည် လေဟာနယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ရှာတယ်။ အရွယ်အစားသုံးမျိုး.
ONYX PRIME မှာလည်း နောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်။ အပိုရာဘာကွင်း ၎င်းသည် မိုက်ခရိုဖုန်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ဖြစ်သည်။ p ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ဒါမှ ဟန်းဆက်ကို ပိုပုံသေစေမှာပါ။ ငါတို့နားကို မလှုပ်နိုင်၊ သူတို့အတွက် အပိုနည်းနည်း ပါပါတယ်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှု မင်းနဲ့လိုက်ဖို့ နားကြပ်ရှာနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း အားကစားဆန်သော။ အခြားမော်ဒယ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်ဖူးပြီးသား ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို စမ်းသုံးပြီးနောက် ၎င်းတို့၏တာဝန်ကို ကျေပွန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့လည်းရှိတယ်။ အရွယ်အစားသုံးမျိုး ဒါမှ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှာပါ။ သူတို့က မင်းရှာနေတာလား။ သင်၏ရယူပါ။ Tronsmart ONYX PRIME အခမဲ့ရေကြောင်းနှင့်အတူအမေဇုံပေါ်မှာ။
နားကြပ်တွင်ရှိသည် အရွယ်အစားသေးငယ်သည်သူတို့က လက်ထဲမှာ သေးသေးလေးတွေဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ငါတို့ဝတ်တဲ့အခါ။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ တောက်ပသောပလပ်စတစ်ပြီးတော့ အလေးချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့ သူတို့ဝတ်ထားတာကို သတိထားမိဖို့ ခက်ပါတယ်။ နာရီပေါင်းများစွာ အသုံးပြုသူများအတွက် သို့မဟုတ် အားကစားလုပ်သည့်အခါတွင် အလွန်အရေးကြီးသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
နားရွက်၏အပြင်ဘက်တွင်၊ ခိုင်မာသည့်အမှတ်တံဆိပ်၏အထက်တွင်၊ ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများ။ သူတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်တေးသွားများကို ရှေ့သို့ သို့မဟုတ် နောက်သို့ ကျော်ပါ၊ ခေတ္တရပ်ပါ သို့မဟုတ် ပြန်ဖွင့်ပါ။ တူညီသောဧရိယာ၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည်။ တက်ကြွသော ဆူညံသံများ ပယ်ဖျက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုမည့် မိုက်ခရိုဖုန်း. အောက်ခြေတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုရှိသည်။ ဦး ဆောင်အလင်း ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်မှု တက်ကြွမှုရှိမရှိ သို့မဟုတ် နားကြပ်တစ်ခုစီ၏ ဘက်ထရီအဆင့်ကို ပြောပြသည်။
El အားသွင်းအိတ်၊ အားသွင်းရန်အတွက် နားကြပ်များကို အနက်ရောင် ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ဤကိစ္စတွင် Matte finish ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ os ကြောင့် နားကြပ်များသည် သင့်လျော်ပါသည်။ သံလိုက်တံများ။ ပူဇော်ကြ၏။ အပိုငွေအပြည့်သုံးမှုအထိ ဒါမှ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ ONYX PRIME သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အမှီလိုက်နိုင်သည်။ ယခုသင်သည် Amazon တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ Tronsmart ONYX PRIME အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း။
Tronsmart ONYX PRIME မှပေးသောအင်္ဂါရပ်များ
La ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် မော်ဒယ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားမော်ဒယ်တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးကြီးဆုံးဟု ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့် ရှုထောင့်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မျိုးပွားမှုရှိသည်။ သီချင်းက ရှစ်နာရီအထိ ဆက်သွားတယ်။ ဝန်တစ်ခုစီအတွက်။ Y စုစုပေါင်း 40 နာရီအထိ အားသွင်းအိတ်ရှိရင်
La ဆက်သွယ်မှု နည်းပညာများ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ အားသာချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘလူးတုသ် ၅.၀. အချိန်တိုင်း လျင်မြန်ပြီး ချောမွေ့သော ချိတ်ဆက်မှု။ နှင့် ကျေးဇူး Qualcomm 3040 ချစ်ပ်နားထောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကို သိသိသာသာ ပိုကောင်းလာစေသည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံအရည်အသွေးကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိပါသည်။
ငါတို့မှာလည်းရှိတယ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော True Wireless Stereo Plus နည်းပညာ. နားကြပ်နှစ်လုံး၏ သုံးစွဲမှုကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်မှု၏ တည်ငြိမ်မှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်လာစေသည်။ အပေါ်မှာလည်း ထည့်တွက်တယ်။ QCC3040 ချစ်ပ်ထက် တက်ကြွသော ဆူညံသံများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။ အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းသော အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်သည်။
La အသံအရည်အသွေး သူတို့သည် မျှော်မှန်းချက်ထက် သာလွန်သည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပလပ်များမလိုအပ်ဘဲ နာရီ 40 အထိ။
ပုံစံ အားကစားအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော။
အရွယ် အားသွင်းအိတ်နှင့် နားကြပ်များ၏ ပျမ်းမျှအထက်။
La ချိန်ညှိရာဘာ အရွယ်အစားမှန်ကန်ဖို့ အရေးကြီးပေမယ့် အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: ဒီဇင်ဘာလ 26 2021
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: ဒီဇင်ဘာလ 25 2021
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Tronsmart ONYX PRIME၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်